Prof. Lidwien Kapteijns oo Akhrisay, Dhaliishayna Buug uu Qoray Maxamed Ingiriis – Radio Daljir
Prof. Lidwien Kapteijns oo Akhrisay, Dhaliishayna Buug uu Qoray Maxamed Ingiriis
Abriil 7, 2017 2:45 b 1
Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qoray buug uu ugu magacdaray “Isdaldalaaddii Soomaaliya: Kicii iyo Dhicii Xukuumaddii Siyaad Barre, 1969-1991.” Buugga waxaa akhrisay Prof. Lidwein Kapteijns, loona yaqaan Prof. Ladan. Ladan aad bay buugga u dhaliishay, dhan kasta, siiba dhanka hab-qoraalka buugga, dhanka aqoon-la’aantiisa afka Ingiriiska, naxwe xumida qoraalka Ingiriiska, iyo kaba-sii-daran e in uu yahay buug uu Maxamed weli ka wado dagaalkii qabaliga ahaa ee Soomaalida, taas oo ay ku tilmaantay nasiibdarro qoraaga oo cilmi iyo caqli sheeganaya dusha ka fuushay.
Waa kan akhriskii iyo dhaliishii Prof. Ladan ee Buugga Maxamed Xaaji Ingiriis:
Ladan waa Kendall Hodder barafasoor Faraca Taariikhda ee Jaamacadda Welesley oo ku taal magaalada Boston, ahna jaamacadaha safka hore ee Maraykanka. Ladan waxay horay u qortay buug ay ugu magac dartay “Xasuuqii Qabaliga ee Soomaaliya” oo ay si qotodheer uga faallootay xasuuqii ururka USC ku kacay sanadihii 1991-1992, kana dhacay Xamar, Kismaayo iyo Koonfurta Soomaaliya (Clan Cleansing in Somalia, The Ruinous Legacy of 1991). Sida ay qortay bogga Jaamacadda Pennsylvania, buuggaas “Xasuuqii Qabaliga ee Soomaaliya” wuxuu ahaa buugaagta uga caansan, ugu daliil wacnaa taariikhda dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya, waajibna ay ku tahay in uu akhriyo qof kasta oo raba in uu fahmo taariikhda Soomaalida iyo Soomaaliya.
Qormooyinka Daljir 52 Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19797
Maamulka Gobolka Nugaal iyo Mulkiilayaasha Gaadiidka Bajaajta oo Kulan Yeeshay
waasax in ladhaliilo qofkii waxa xun bulshada ubandhiga